Iiprotographic - Geofumadas
Izicelo kunye nezibonelelo inzululwazi ojongene isifundo kunye nophuhliso iimephu eengingqi.
IScotland ijoyina iSivumelwano seCandelo loLuntu seCandelo
Urhulumente waseScotland kunye neKhomishini ye-Geospatial bavumile ukuba ukususela nge-19 kaMeyi 2020 eScotland bayakuba yinxalenye yesiVumelwano seCandelo lezaMandla sikaRhulumente. Esi sivumelwano kuzwelonke ngoku siza kuthatha indawo yeSivumelwano seMephu yaseScotland (i-OSMA) kunye nezivumelwano zaseGreenspace eScotland. Abasebenzisi bakaRhulumente baseScotland, ...
Iiphotography, Geospatial - GIS, ezintsha
U-Esri upapasha iNcwadi yoMsebenzi kaRhulumente ebukhali kaMartin O'Malley
U-Esri ubhengeze ukupapashwa kweNcwadi yoMsebenzi kaRhulumente eSmarter: Isikhokelo sokuFezekiswa kweeVeki ezili-14 zokuLawula iZiphumo ngowayesakuba liRhuluneli yaseMaryland uMartin O'Malley. Incwadi ihambisa izifundo kwincwadi yakhe yangaphambili, Urhulumente oBukhali: Indlela yokuLawula iZiphumo kwiXesha loLwazi, kwaye ngokubonakalayo ucwangcisa intsebenzo ekulula ukuyilandela ...
ArcGIS-ESRI, Blog, Iiphotography, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
LAPHA kunye neLoqate Yandisa ubuhlakani ukuncedisa amashishini enza ukuba ukuhanjiswa kungeniswe
I-HERE teknoloji, idatha yendawo kunye ne-teknoloji yeqonga, kunye ne-Loqate, umphuhlisi ophambili wokuqinisekisa kwidilesi yehlabathi kunye nezisombululo ze-geocoding, babhengeze intsebenziswano eyandisiweyo ukubonelela amashishini ngokufumana idilesi, ukuqinisekiswa, kunye netekhnoloji ye-geocoding. Iinkampani kuwo onke amashishini zifuna idilesi yedilesi ...
ukwenziwa kwedijithali ukucoceka I-Geomatics GIS APHA
Iiphotography, Geospatial - GIS
Sibheke iphepha elincomekayo kakhulu, elibizwa ngokuba yi-truesizeof, kuthatha iminyaka kwinethiwekhi kunye nayo-ngendlela echanekileyo kwaye elula-, umsebenzisi unokuthelekisa ukongezwa kwendawo phakathi kwelinye ilizwe okanye kumazwe amaninzi. Siyaqiniseka ukuba, emva kokusebenzisa kwesi sixhobo esisebenzayo, unokufumana ...
I-FORUM MUNDO UNIGIS, i-Cali 2018: amava e-GIS achaza kwaye aguqula umbutho wakho
UNIGIS Latin America, Universität Salzburg kunye neDyunivesiti ICESI zinikwe kuphuhliso kakhulu kubunewunewu kulo nyaka, usuku olutsha WORLD FORUM UNIGIS, Cali 2018 isiganeko: Amava GIS ukuba livakalise kwaye uguqule umbutho, ngoLwesihlanu 16 Novemba ngo University ICESI -Auditorio Cementos Argos, Cali, Colombia. Access ukhululekile. Ke ...
ArcGIS-ESRI, Iiphotography, Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS
I-EOS ikuvumela ukuba wenze imisebenzi yokucwangcisa umfanekiso kwisiphequluli
Uninzi lwemisebenzi yokuhlalutya imifanekiso efuna i-Erdas Imagine okanye i-software ye-ENVI ngoku ibulele kwi-Intanethi ye-EOS (i-EOS Platform). Inkonzo entsha yelifu elitsha eqaliswe ngu-EOS Data Analytics kubafundi be-GIS isisombululo esiphezulu sokukhangela, ukuhlalutya, ukugcinwa nokubonakaliswa kwezinto ezinkulu ...
Faka imephu kwi-Excel-fumana i-coordinated geographical-UTM
Imephu.XL yisicelo esikuvumela ukuba ufake imephu ngaphakathi kwe-Excel uze ufumane izilungiso ngqo kwimaphu. Unokubonisa kwakhona uludwe lwezakhono zokuhamba kunye neendlongo ezinde kwimaphu. Indlela yokufakela imephu kwi-Excel Emva kokuba iProgram ifakiwe, ifakwe njengetye eyongezelelweyo ebizwa ngokuthi "Imephu", kunye nemisebenzi ye ...
Umhlaba ka-Google Office for ebulalayo
Iiphotography, Google umhlaba / imephu, Ukuprinta kokuqala
Ixesha elidlulileyo: Ukunyamekela yonke into enxulumene nejografi kunye nokuphuhliswa kwebalazwe kwilizwe ngalinye kuye kwadala ukudala ama-arhente karhulumente aphethe lo msebenzi obalulekileyo. Kwezinye iimeko zixhomekeka kwiSebe lezoKhuseleko okanye kwelinye ngokuxhomekeke kwiteksi yentlangano yangaphakathi yelizwe ngalinye, olu hlobo ...
Iiphotography, Internet kunye neBlogs, Ukuprinta kokuqala
Ifumaneke ngeFree - I-Template yokuguqula i-UTM izikhokelo kwi-Geographic
Ukunikezelwa kwexesha elincinci
Isihloko sokubeka izimvo namhlanje yi-Web GIS. Ngokuba 'uninitiated', inokuguqulelwa nje ngokuthi 'i-GIS kwiWebhu', kodwa oko kuthetha ukuthini ngempela? Ziziphi iindawo zalo? Kutheni 'kuninzi amathuba okufaka isicelo' njengoko kuchaziwe kwisihloko sale post? Kukho izizathu ezihlanu zokuthi u-Eric van Rees usebenza kwi ...
ArcGIS-ESRI, Iiphotography, Geospatial - GIS
Indlela ukudala imaphu eqhelekileyo, bangafi emizameni?
Kutshanje Allware Company Ltd yasungula Framework Web ekuthiwa eZhing (www.ezhing.com), apho unako 4 amanyathelo ekubeni mephu akho abucala zalathisi kunye IoT (mvo, IBeacons, Alamas, njalo njalo) konke ngexesha lenene. 1.- Yenza ubeko (Zones, izinto, amanani) layout -> Gcina, Mthiye igama lakhe 2.- i Propierties izinto -> Gcina, 3.- ubhenca ...
Umhlaba ka-Google IMaphu
Iiphotography, Okufumaneka, Google umhlaba / imephu, Ukuprinta kokuqala
Eli nqaku umdla ngu Regis Wellausen epapashwe kwiphephancwadi MundoGEO, ebakhumbuza ukuba ezo ngxelo Catastro2014 vuhlayiseki ephakanyiswe yi-Isazobe amabini eminyaka, ingakumbi ezinxulumene umzekelo abe lilalela cartography yemveli. Isiphakamiso sesisombululo sesithuba sokutshintsha iparadimi yokuguga ...
Lwesayizi yokwenene amazwe
i -truesize.com yindawo ekhangayo, apho unokufumana khona amazwe kwi-GoogleMaps umbukeli. Xa udibanisa izinto, unokubona ukuba amazwe aphikisana nokohlula. Njengoko kuboniswe kumfanekiso, ukubonakala kwe-cylindrical, xa uzama ukwenza ukubonakala kwendiza, kuqhubisela ...
Iiphotography, Google umhlaba / imephu
Iimephu ze-25,000 emhlabeni wonke ziyafumaneka ukukhuphela
Ukuqokelela kweeMephu zeThala leencwadi ePerry-Castañeda kukuhlanganiswa okumangalisayo okuqulethe ngaphezu kweemephu ze-250,000 eziye zafundwa kwaye zafumaneka kwi-intanethi. Uninzi lwamabalaphu luseburhulumenteni kwaye, okwangoku, ziyafumaneka kufuphi ne-25,000. Ngokomzekelo, sibonisa ezinye iimephu ezikhoyo kwi ...
Iiphotography, Ukufundisa i-CAD / GIS, Internet kunye neBlogs
JOSM - A CAD for data ukuhlelwa OpenStreetMap
I-OpenStreetMap (OSM) mhlawumbi yimizekelo emikhulu yendlela ulwazi olunikezwa ngayo ngokubambisana lunokwenza umzekelo omtsha wolwazi lwe-cartographic. Ngokufanayo ne-Wikipedia, le nyathelo yaba yubaluleke kakhulu kangangokuba namhlanje kwii-geoportals kulungele ukubeka lo mgca ngasemva ukuba uxhala malunga nokuhlaziywa kolwazi lwakho kwiinkalo ...
Iiphotography, Ukuprinta kokuqala
Ibalaphu lewebhu livuselela imifanekiso yembali
Mhlawumbi asisoze siphupha ukubona imephu yembali, iphakanyiswe kwiGoogle, ngoko sinokukwazi ukuba iminyaka eyi-300 eyadlulayo yindawo apho sikumi namhlanje. Ubugcisa beemephu zewebhu buvumelekile. Nawe! ngayiphi indlela Umzekelo walolu luhlu olungabonakaliyo lwaseLondon, apho ayenzanga kuphela ...
Iiphotography, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu
Olu hlobo lwakamuva lwe-National Geographic luzisa izihloko ezibini ezinomdla kakhulu: Ngakolunye uhlangothi, ingxelo epheleleyo kwinkqubo yokumisela ifa lemveli ngokusebenzisa iindlela zokubamba i-laser. Le nto ingumqokeleli, ochaza ubunzima obuthatha imisebenzi ebusweni beNtaba yaseRushmore eMzantsi Dakota ...
Iiphotography, Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 7 kwiphepha elilandelayo
I-GOES vs i-POES satellites
Yintoni umzobo weVoronoi?
Hlaziya idatha yedatha kunye neArcGIS Pro Spatial Analyst
Yintoni intshukumo ejikelezayo kunye notoliko loMhlaba?
QGIS 3 Ikhosi ekhawulezileyo